घर भाडामा लिएर …. – Jagaran Nepal
काठमाडौं । दमक नगरपालिकाबाट महिलालाई घरमै राखी वे’श्या’वृ’त्तिमा लगाउँदै आएका दुई महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मोरङ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–३ की ३८ वर्षीया उर्मिला नेम्वाङ र इलाम चुलाचुली गाउँपालिका–४ बस्ने ३८ वर्षीया नन्दिता लिम्बू रहेका छन् ।
उनीहरुलाई दमक नगरपालिका–६ स्थित नयाँ सब्जीमण्डीमा घरभाडामा लिएर वे’श्यावृ’त्ति गराउँदै आएको विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । सोही घरबाट आठ जना १७ वर्षदेखि ३९ वर्ष उमेर समूहका महिलाको समेत प्रहरीले उद्धार गरेको छ ।
उद्धार गरिएका सबैलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ । दुई महिलालाई यही चैत १५ गते प्रहरी पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका दुवै महिलालाई मा’नव बे’चविखनवि’रुद्धको मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालत झापाबाट म्याद थप लिई अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता राकेश थापाले बताए ।
त्यस्तै नवलपरासीस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश होटलमा युवती राखेर यौ ‘न ध’न्दा सञ्चालन हुने गरेको गुनासो बढेपछि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ । अवैधानिकरूपमा गरिने यस्ता क्रियाकलापलाई कुनै पनि हालतमा छुटकारा नदिने प्रहरीले बताएको छ ।
सोमबार मात्रै होटलमा अ’नैति’क क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको अभियोगमा प्रहरीले एक होटल सञ्चालकसहित १० युवायुवतीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । बर्दघाट नगरपालिका–२ चिसापनीस्थित बिभिन्न लाजमा अ;वैध यौ’न क्रि’याक’लाममा सं’लग्न छ पुरुष र चार महिलासहित होटल सञ्चालक लाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दियो।
उक्त होटलमा अनैतिक क्रियाकलाप हुने गरेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले केही दिनदेखि निगरानी गरी सोमबार विशेष सूचनाको आधारमा छापा मा रेको थियो । पक्राउ परेकाहरु विरुद्ध कानूनबमोजिम आवश्यक का’रवाहीका लागि अनुसन्धान चलिरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
यसअघि पनि प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न होटलबाट यस्ता क्रियाकलापमा सं’लग्नहरुलाई प’क्राउ गर्दै आएको छ । तर पक्राउ परेलगत्तै छुट्ने हुँदा यस्ता गतिविधि नियन्त्रण नभएको सरोकार भएकाहरु बताउँछन् ।
विशेषगरी जिल्लाको सुनवल, भूमही, बर्दघाटलगायतका स्थानमा सञ्चालनमा रहेका होटलमा यस्तो धन्दा बढेको बताइएको छ । सदरमुकाम परासीमा पनि केही होटलमा अवैधरूपमा यस्ता गतिविधि हुने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
धेरै होटलले काम गर्न भनेर राख्ने तर यौ ‘नध’न्दा गर्न बा’ध्य पार्ने गरेका छन् भने कतिपय युवती बढी पैसाको प्रलोभनमा परेर यस्तो ध’न्दामा फस्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले बताएको छ ।
सबै महिलाले हिमानीवाट संस्कार सिकुन् भन्दै संसदमै सांसदले गरे हिमानीको प्रशंसा
‘मैले बुहारी मा रे को छैन्, बुहारी जिउदै छिन्’
निर्मला पन्त र भागीरथी भट्ट लगायतका चेलीहरुमा समर्पित दर्दनाक पिडा समेटिएको गीत सार्वजनिक, सारा नेपालीको आँखा रसाउने हेर्नुहोस यो भिडियो
के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ ? ९ वर्ष उपचार गर्दा निको नभएको रोग झाँक्रीले निको बनाएको भन्दै आइन् यि युवती, यसरी गरे झाँक्रीले उपचार (भिडियो हेर्नुस्)